अमेजन आगो ट्याब्लेट समीक्षा - समाचार नियम
अमेजन आगो ट्याब्लेट समीक्षा
म एक £ 50 ट्याब्लेट धेरै कम आशा थियो. तर अमेजन आगो तिनीहरूलाई सबै smashed. यो त सानो लागत जब यो वास्तवमा यो कति-मलबा छैन एकदम उल्लेखनीय छ.
शीर्षक यो लेख “अमेजन आगो ट्याब्लेट समीक्षा: बस £ 50 लागि ट्याब्लेट धेरै” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, लागि theguardian.com बिहीबार 12 औं नोभेम्बर मा 2015 07.00 UTC
अमेजन गरेको नवीनतम कम लागत आगो प्रश्न सोध्छन्: गर्न सक्छन् तपाईं फिर्ता सेट कि बस 50 £ प्रत्येक ट्याब्लेट, वा पाँच किन्न र एक स्वतन्त्र, सबै कुनै पनि राम्रो हुन?
यो मूल आगो ट्याब्लेट को पाँचौ संस्करण, जो पहिलो मा शुरू 2011 यसको पुस्तकहरू र भिडियो सेवाहरू पहुँच गर्न एप्पल गरेको आईप्याड undercut र एक कम लागत ट्याब्लेट उत्पादन गर्न अमेजन गरेको प्रयास रूपमा.
एक कुनै-तामझाम कालो मत्ती प्लास्टिक शरीर. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
बाक्लो, Chunky र मजबूत आगो ट्याब्लेट को सबै भन्दा राम्रो वर्णन छ. Textured कालो प्लास्टिक समेटिएका, यो 313g वजन, अधिक 1cm मोटी छ र हात मा गहन महसुस.
यो मुद्दा बिना Knock वा दुई लिन सक्छ भने जस्तै महसुस. अमेजन आगो ट्याब्लेट एक एप्पल आईप्याड एयर रूपमा टिकाउ रूपमा दुई पटक छ दाबी2कम्पनी गरेको "लडनु परीक्षण" मा. म त्यो विश्वास गर्न सक्छौं, तर यसको साना आकार शायद कि एक ठूलो भाग खेल्छ.
फिर्ता मा वक्ताले गर्दा हात भिडियो हेर्न पर्याप्त ठूलो छ, तर ठूलो वा लुगा धुने मिसिन भान्सा मा पूर्ण-झपटना छ जबकि एक भिडियो हेर्न पर्याप्त स्पष्ट छैन.
यो 7in स्क्रीन HD छैन. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो 7in स्क्रीन HD छैन. यो एक संकल्प छ 1024 x 600 पिक्सेल, लागि HD न्यूनतम 720 संकल्प तल जो. यो पनि एक अपेक्षाकृत कम पिक्सेल घनत्व छ 171 प्रति इन्च पिक्सेल - यो कुनै आईप्याड छ तर यो पनि लागत को छैटौं भन्दा कम छ.
तर स्क्रिन मूल्य लागि अचम्मको कुरा राम्रो छ. यो reasonably उज्ज्वल छ, राम्रो हेर्ने कोण छ र रंगीन छ, भने पनि यसको अश्वेतहरुको एक बिट खैरो छन्. तर यो एक परिवेश प्रकाश सेन्सर छैन, त्यसैले तपाईं स्वयं यो समायोजन गर्न रात मा आफैलाई अन्धा छैन गर्नुपर्छ, र यो ठीक कुरकुरा छ.
भिडियो हेर्दै वा प्ले खेल पनि खराब छैन, यो पढाइ पुस्तकहरू लागि passable छ जबकि.
खेल, अनुप्रयोगहरू र चलचित्रहरू राम्रो हो
आगो ट्याब्लेटमा-बोर्ड प्रयोगकर्ता सुलभ स्पेस 5GB छ, अधिक थप एक microSD कार्ड स्लट संग. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
आगो ट्याब्लेटको 1.3GHz प्रोसेसर र राम 1GB संसारको उत्रनु सेट गर्न जा छैनन्, तर तिनीहरूले मेरो परीक्षणमा आश्चर्यजनक सक्षम थिए. ट्याब्लेटको सञ्चालन विशेष गरी sprightly थियो, न त यो संसाधानसंवादआधार भरिएको थियो.
भिडियो लोड र तुरुन्त खेलेको, खेल सबैभन्दा भाग लागि चिल्ला थिए, चित्रात्मक गहन खेल सहित जो ट्याब्लेटको बडा भाइ आगो HD मा 10 डकगरिएको. यस्तो स्मारक उपत्यका रूपमा खेल एक iPad भन्दा लोड गर्न अब लिए, र चालु अनुप्रयोगहरूले बीच स्विच समय समयमा अलि सुस्त, तर केही पनि infuriating थियो.
स्क्रिन अधिकतम चमक सम्म गर्यो भिडियो प्लेब्याक वरिपरि पाँच घन्टा को लागि ब्याट्री लामो, अब यसलाई एउटा सानो मधुरो संग. चार्ज ढिलो भयो, पाँच घण्टा भन्दा बढी लिएर पूर्ण चार्ज गर्न. तपाईं आशा सक्छ रूपमा वाइफाइ र ब्लुटुथ काम. एक microSD कार्ड स्लट बढी भण्डारण थप्दा लागि उपलब्ध छ.
एक परिवेश प्रकाश सेंसर कमी को ब्याकलाइटद्वारा को मार्गदर्शन समायोजन आवश्यक छ मतलब, विशेष उज्ज्वल सूर्यका वा साँझमा मा. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
आगो ट्याब्लेट आगो HD रूपमा अमेजन गरेको एन्ड्रोइड 5.1.1 आधारित आगो ओएस को नै संस्करण चल्छ 10. यो सामग्री र छिटो र सजिलो खेल गर्न रही बनािन्छ.
यो केवल अमेजन गरेको अनुप्रयोग स्टोरमा पहुँच छ, तथापि, तपाईं गुगलको प्ले स्टोर तुलना आवेदन र खेल आफ्नो रुचि मा सीमित छन् जो मतलब. सबैभन्दा, तर शीर्ष अनुप्रयोगहरू सबै उपलब्ध छैन, यस्तो Netflix रूपमा भिडियो सेवाहरू स्ट्रिम.
आगो पनि अमेजन गरेको भूमिगत सेवा छ, जसमा-अनुप्रयोग खरिद मुक्त निःशुल्क अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्दछ, तपाईं कम्पनीको प्रधानमन्त्री सेवा सदस्यता भने.
तपाईं आशा सक्छ रूपमा, यसको आफ्नै भिडियो को अमेजन गरेको एकीकरण, संगीत, पुस्तक र किनमेल सेवाहरूको उत्कृष्ट छ.
क्यामेरा गरिब छन्, मात्र साँच्चै राम्रो Snapchat लागि पर्याप्त. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
पछाडि 2-मेगापिक्सेल क्यामेरा भयानक छ. यो एक सीसीटीवी क्यामेरा जस्तै गुणस्तर र विस्तार बारे तस्बिरहरू उत्पादन, र एक असल एक. यो वीजीए selfie क्यामेरा सीमान्तता राम्रो छ, तर धेरै यसो छैन गर्नुपर्छ.
यो अमेजन आगो "पाँच मुक्त एक प्राप्त buy" बस £ 50 लागत र एक थोडा हास्यास्पद मा उपलब्ध छ (BFGOF) प्रस्ताव. ट्याब्लेटको लक स्क्रिनमा विज्ञप्ति संग आउछ, तथापि, र तिनीहरूलाई हटाउने £ 10 लागत.
£ 70 को Samsung वा एसस लागत माथि देखि निकटतम ब्रांडेड पाटी.
यो कल्पना को कुनै पनि खंड द्वारा एक शानदार ट्याब्लेट छैन. स्क्रिन कम संकल्प छ, ब्याट्री लामो पछिल्लो गर्दैन, यसको क्यामेरा woeful छन्, यो भारी र Chunky छ र यो केवल प्रयोगकर्ता पहुँच आन्तरिक भण्डारण 5GB छ.
यो कुनै आईप्याड वा नेक्सस छ 7, तर यो साँच्चै जस्तै हुनेछ महसुस एक सस्तो र हँसिलो 7in ट्याब्लेटको र यसलाई किनकी तिमी बस अर्को एक खरीद छैन भने सकेन कुरा छैन.
तपाईं भिडियो लागि अमेजन गरेको प्रधानमन्त्री सेवा सदस्यता यदि यो साँच्चै मात्र अर्थमा बनाउँछ, पुस्तकहरू र अनुप्रयोगहरू, तर £ 50 मा यो एक आवेग खरीद छ.
पेशेवरों: सस्तो, अमेजन भिडियो, पुस्तकहरू र संगीत सेवाहरू, microSD कार्ड स्लट, टिकाउ महसुस
नकारात्मक: कम कोटि स्क्रीन, भारी, chunky, गरिब क्यामेरा, चार्ज गर्न उमेर लिन्छ, ब्याट्री जीवन शानदार छैन
ट्याब्लेटको microUSB मार्फत चार्ज गर्न पाँच घन्टा लाग्छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
Amazon.com, एन्ड्रोइड, लेख, ग्याजेटहरू, समीक्षा, शमूएल गिब्स, ट्याब्लेट कम्प्युटर, प्रविधि
← Blackphone2समीक्षा: गोपनीयता उपयोगिता लागत मा आउन छैन मेसेन्जरमा फेसबुक परीक्षण Snapchat-शैली आत्म-destructing च्याट →